जुलाईदेखि जापान सीधा उडान गर्ने निगमको तयारी,अष्ट्रेलियामा कहिले ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ चैत्र २०७५, मंगलवार २२:३३ |
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले तीन महिनाभित्र जापानको ओसाकामा उडान भर्ने भएको छ ।
जापान उडानका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको निगमले जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो (जेक्याब) लाई दुई दिनभित्र आवश्यक कागजात बुझाउने जनाएको छ ।
कागजी प्रक्रियाका साथै आन्तरिक तयारी सकेपछि आउँदो जुलाई महिनादेखि ओसाका उडान औपचारिक रुपमा शुरु गरिने निगमका सहायक प्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । जापान एभिएसनबाट उडान अनुमति पाएपछि उडान तयारीका लागि ४५ दिन लाग्ने छ भने अनुमति आएपछि पनि थप ३० देखि ४५ दिन निगमलाई आन्तरिक तथा बजार व्यवस्थापनमा समय लाग्नेछ ।
ओसाकासँगै जापानकै नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि उडान भर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । नारिता उडानका लागि करीब दुई साताअघि पत्राचार गरेको निगमले नारिता विमानस्थलका उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय वार्तासमेत गरेको छ ।
निगमले नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको अष्ट्रेलियाको सिड्नी र मेलबर्नमा पनि सीधा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । तर यसबारेमा औपचारिक प्रक्रिया भने शुरु भैनसकेको सहायक प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो ।
Previousनेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ परेपछि विप्लवलाई धक्का,गर्लान् त आत्मसमर्पण ?
Nextअस्पतालमा हवाई आक्रमण,कम्तिमा सातजनाको मृत्यु
७ आश्विन २०७५, आईतवार ०७:१५